IFTIINKACUSUB.COM: Aadamiga iyo Garashada.
John waa uu iska tegay. Waxa uu bilaabay shaqo adag oo uu ku bixiyey saacado intii hore ka badan. Laakiin waa uu awoodi waayey in uu dhir badan soo gooyo oo uu waxsoosaarkiisa kor u qaado. Dabadeed waxa uu ku noqday ninkii maamulaha u ahaa, waxana uu u sheegay arrinta daran ee haysata. Maamulihii waxa uu ku yidhi: ‘Bill u tag oo warayso.
Waxa laga yaabaa in wax aynaan garanayn uu garanayo e’ ‘.Ninkii John ahaa waxa uu u tegay Bill, waxana uu weydiiyey sida ay ugu suurtagashay in uu soo gooyo dhir badan. Bill baa ku jawaabay: ‘Mar kasta oo aan geed jaro labo daqiiqo ayaa aan nastaa, faashkaygana waa aan afeeyaa (soofeeyaa). Adiga goorma ayaa kuugu dambaysay in aad afayso faashkaaga?!’ " (Xigasho: dhiganaha "You Can Win" ee uu qoray qoraaga caanka ah, Shiv Khera).